ओली सरकारले कालापानी क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट सुरक्षाकर्मी पठाउँदै, अब भारतीय दादागिरी नचल्ने! - Deshko News Deshko News ओली सरकारले कालापानी क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट सुरक्षाकर्मी पठाउँदै, अब भारतीय दादागिरी नचल्ने! - Deshko News
दार्चुला, २८ वैशाख ।
सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। यसका लागि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको कालापानी क्षेत्र नजिकै सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना हुँदैछ।
गत मंसिरमै नेपाल सरकारले बीओपी राख्ने निर्णय गरेको भए पनि विभिन्नका कारण ढिलाइ भएको थियो। भारतले यही शुक्रवार नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनसँग सीमा जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेपछि सरकारले अहिले तत्काल व्यासको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्ने भएको हो।
बुधवार व्यासको छाङ्गरुमा बीओपी स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० का सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्मरबहादुर विष्टले जानकारी दिए। ‘गागामा सशस्त्र प्रहरी पठाएर बीओपी राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने।
सशस्त्र प्रहरी पठाउनुपर्छ भन्दै पटकपटक जिल्लाबाट रिपोर्टिङ हुँदै आएको थियो। व्यासको छाङ्गरु गागामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्न स्थानीयवासीले जमीनसमेत उपलब्ध गराएका छन्। स्थानीयवासीले गागामा कित्ता नम्बर ३५ को ११५ रोपनी तीन आना जग्गामध्ये १५ रोपनी जमीन सशस्त्र प्रहरीलाई दिइसकेको छ। बीओपी स्थापना हुने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५० नम्बर गुल्म दार्चुलाबाट गत चैत पहिलो साता निरीक्षणसमेत गरिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टरमार्फत गृहमा व्यासमा सशस्त्र प्रहरी पठाउने स्वीकृतका लागि पत्र गइसकेको सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। भारतले नेपाली भूमि भएर सडक निर्माणपछि सीमामा राज्यको उपस्थिति गराउनुपर्ने दबाब परेको थियो। अहिले नै भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था नभए पनि घर भाडामा लिएर सशस्त्र प्रहरी राख्ने तयारी भएको हो। अहिले हिमपात पनि कम हुँदै गएका कारण सशस्त्र प्रहरी बस्न सक्ने अवस्था रहेको विष्टको भनाइ छ। यसअघि व्यासको तिङ्करको छायालेक र छागङ्रुको सीतापुलमा रहँदै आएका नेपाल प्रहरीका दुवै युनिट अहिले व्यास गाउँपालिका-२ को दुम्लिङ झरेको छ।
प्रहरी पनि सशस्त्रसँगसँगै व्यास पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए। उनका अनुसार टोली तयारी अवस्थामा छ, हेलिकप्टर वा कुञ्चासँगै पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रजिअ यदुनाथ पौडेलले दुवै सुरक्षा निकायका एकसाथै पठाउँदा ठूलो टोली हुने हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।